Boosaaso - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Boosaso)
Caasimad in Bari, SoomaaliyaTemplate:SHORTDESC:Caasimad in Bari, Soomaaliya
Sawiro meelo kala duwan Magalaada Boosaaso
Qarnigii 14-aad dhexdiisa -[xigasho u-baahan]
• Guddoomiya Golaha Deegaanka ahna Duqa Magaalada
Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam
Boosaaso (Af carabi: بوصاصو; Af Ingiriis : Bosaso; sidoo kale loo yaqaano Benderqaazim waa magalo ka mid ah magaalooyinka ugu waayayn Soomaaliya, waana magaalada ugu weyn Magaalooyinka maamul gobolleedka Puntland isla markana waa magalada 3-aad ee ugu weyn magalooyinka Soomaaliya marka laga reebo Muqdisho iyo Hargeysa. Waa magaalo aad u soo koreysa, waana Magaalada 3-aad ee ugu koriinshaha badan marka laga reebo muqdisho iyo hargeysa. Magaladaan waa magaalo ganacsi iyo saqaafadeed waxaa degan dad lagu qiyaasaayo 1000,000 oo qof tirakoob laga sameeyay 2013, Dekeda magaalada Boosaaso waxay ka mid tahay dekedaha ugu mashquulka badan dekadaha wadanka Soomaaliya, waxaana taas usuurta geliyay dadka deegaankaas degan oo ah dad ku tiirsan gacansiga iyo dhammaan gobalada Soomaaliya iyo kuwa wadamada deriska ah sida degaanka Soomaali Galbeed (Ogaadeeniya) ee Itoobiya oo aad u isticmaala dekada magalada Boosaaso. Boosaaso wa magaalada ugu fog dinaca bariga oo qaaradda Afrika ku yaal.
Bari waa Gobalka ay ka tirsantahay Magalada Boosaaso, waxayna u tahay magaalo madax. Intaas waxaa dheer, magaaladaan waxay utahay degaanada Puntland magalada ugu weyn uguna dadka badan uguna muhiimsan xag-kastaba, waxayna hogaanka uhaysa ganacsiga, waxbarashada Iyo horumarka gobaladaas waxayna maamul ahaan hoos tagtaa maamul-goboleedka Puntland. Boosaaso waa magaalo ay nabad iyo xasiloon ka jirto sida magaaloyaasha kale oo ku yaalo woqooyiga. Magaaladaan waa magaalo ku dadaasha horumarka. Boosaaso waxay leedahay hoteelo badan oo aad u casriyeysan iyo meelo lagu caweeyo, sida meelaha internetka lagu galo iyo maqaayado farabadan. Magalada waxay u dhowdahay buuro iyo goob loo dalxiis tago oo aad u quruxbadan waxaana kamida buuraha mareero, deegaanka gerible, Baalade, Gaaca, Biyo kulule, laag iyo Karin oo dhamaantood dalxiiska ku wanaagsan.
2 Kaabayaasha Dhaqaale
4 Maamulka Magaalada
6 Dalxiiska & Hoteelada
8 Barxadda Maagalada
9 Magaalooyinka la mataansan
10 Sidoo kale fiiri
Taariikh ahaan halka magaaladu ku taalo waxaa markii ugu horreysay inta la xasuusto degay Nin ganacsade ahaa oo la oran jiray Qaazim, Ninkani wuxuu ahaa soomali beel ahaanna wuxuu ka soo jeeday beesha Gabtaanle oo ka mid beelaha la mataansan Beesha Dishiishe ee Daaroodka Qaazim wuxuu la haan jiray hal uu aad u jeclaa oo la oran jiray boosaas, waxaana la rumaysan yahay halkaas inuu yahay halka uu ka yimi magaca magaalada oo loogu magacdaray hashii qaazim ee daaqi jirtay xeraduna uga oodnayd halka haatan magaaladu ka dhisan tahay, Sidoo kale magaalada waxaa loo yaqaan Benderqaazim oo la macna ah Goobtii ama benderkii Qaazim taas oo sida la sheegay ay ganacsato carbeed u bixiyeen magaalada iyagoo ku hal qabsanayey qaazim oo ahaa ninkii deganaa halka magaaladu hada tahay, wixii intaa ka dameeyay waxaa goobta soo degay beesha Dishiishe kadibna waxay noqotay magaalo la degan yahay, si kasta ha ahaatee beesha Dishiishe ayaa loo arkaa inay yihiin dadkii ugu horreeyay ee asaasay magaalada Boosaaso.
Boosaaso waxay aad u dhisantay burburkii dowladda dhexe ka dib, waxaana isugu yimid oo ay marti galisay Soomaalidii ka soo qaxday koonfurta iyo galbeedka, waxaa xusid mudan in dadkii deegaanka bosaso ku noolaa ay aad u soo dhoweyeen dhamaan dadyowgii ku soo qaxay magaalada oo ahayd halkii ay dadka ugu badan ee woqooyi bari ku soo laabtay qaabishay, Gaar ahaan waxaa aad arintaa loogu ammaanaa beesha Dishiishe oo si diiran, oo dadnimo iyo soomaalinimo leh ugu soo dhoweeysay dhamaan dadkii magaalada ku soo qaxay. Qaramada Midoobay sida: UNICEF, WFP, UNDP, UNHCR, DRC, SPDS, NRC .
Boosaaso deegaan ahaan waxaa dega beesha Dishiishe - Daarood waana reer saamayn ku leh Puntland iyo Soomaaliya, Sidoo kale bosaso haatan waa xarun weyn oo soomali badani ku nooshahay gaar ahaan qabaa'ilka Hartiga oo magaaladu u noqotay xarun ganacsi iyo saqaafadeed. iyo soomaali kale oo aad u farabadan. Baarlamaankii ugu horeeyey ee dowladda Soomaaliyeed oo xor ah waxaa Boosaaso laga soo doortay mudaneyaasha kala ah Mudane Ugaas Yaasiin Ugaas Cabdirixmaan oo ka mid ahaa Xildhibaannadii Qaranka iyo Isimmaddii ugu magaca iyo ixtiraamka badnaa goboladaas iyo soomaaliyaba, iyo Mudane Xaaji Bashiir Ismaaciil Yuusuf oo isna ku soo baxay xubinta labaad ee degmada maadaama degmadu ay hoos imaan jireen deegaano aad u faro badan maadaama ay ahayd xarunta gobolka. Barkhad Cali Saalax ayaa loo doortay duqii ugu horreeyay ee Degmada Boosaaso madaxbanaanida ka dib.
Runtii Mudaneyaasha ka soo jeeday Degmadda Boosaaso waxay ka mid ahaayeen akhyaartii iyo tiirarkii midnimadda iyo dowladnimadda ummadda Soomaaliyeed, waxay caan ku ahaayeen Dhaqan Islaami ah iyo Wadaniyad, ayagoo gacan iyo taageero ka helaya dadweynaha iyo wax-garadka maamula deegaankaas, waxay Degmadda, Gobolka iyo Dalkaba u soo hoyiyeen sharaf iyo sumcad, waxayna ka tirsan-yihiin beesha Harti - Daarood ee Soomaaliyeed.
Sanadka 2016, Garoonka diyaaradaha Bosaso oo la casriyeeyay
Magaalada Boosaaso waxay leedahay mid ka mida Afarta dekedood ee Soomaaliya, Sidoo kale Magaaladu waxay leedahay Garoon diyaaradeed oo casri ah baaxadiisuna aad u weyn tahay. Horaantii sanadii 2016 ayaa xariga laga jaray Garoonka oo dayactir, ballaarin iyo casriyayn ay ku samaysay shirkad CCECC ee laga leeyahay dalka Shiinaha.
Sidoo kale Dekedda Boosaaso waxay u adeegtaa umadda Soomaaliyeed, Dekadani waxay ka mid tahay kuwa ugu weyn uguna mashquulka badan Soomaaliya. Warbixin ay sii daysay Idaacada BBC waxaa lagu sheegay in Dekeda Boosaaso tahay tan koowaad ee xoolaha Soomaalida laga dhoofiyo.
Boosaaso waxay ku taal waqooyi-bari Soomaaliya, xeebta Gacanka Cadan. Degsiimooyinka u dhaw waxaa ka mid ah Bariga Rehiss (3.5 km ama 2.5 mayl), waqooyi-bari Mareero (14 km ama 8.5 mayl), galbeedka Baalade (3.5 km ama 2 mayl), koonfurta-galbeed Laas Geel (16.5 km ama 10 mayl) ), dhanka koonfurta Laas deero (20.5 km ama 13 mayl), iyo koonfurta bari Gaaca (36 km ama 22.5 mayl). Magaalooyinka ugu waaweyn dalka ee u dhow Bosaso waxaa ka mid ah Ceerigaabo (212 km ama 132 mayl), Burco (442 km ama 275 mayl), iyo Berbera (465 km ama 289 mayl). Shimbiris, oo ah meesha ugu sarreysa ee Soomaaliya, wuxuu ku yaal ilaa 220 km (140 mayl) dhanka koonfur-galbeed ee buurta Cal Madow.
Arimaha maamul waxaa gacanta ku haya Dowladda Hoose ee magaalada. Guddoomiyaha degmada ahna gudoomiyaha golaha deegaanka waxaa soo doorta Xubnaha golaha deegaanka oo ka kooban 29 xubnood. Maamulka magaalada haatan waxaa hogaansha Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo golaha deegaanku si wada jira u doorteen 2015
Jawiga magaalada waa kulayl xilliga xagaaga lagu jiro, xilliyada kalena waa iska caadi.
Dalxiiska & Hoteelada
Bosaso waxay leedahay goobo caan ah oo loo dalxiis tago waxaa ka mid ah Biyo kulule oo ka mid ah meelaha ugu caansan soomaaliya ee loo dalxiiska tago. Biyo kulule wuxuu dhacaa dhanka bari ee magaalada wuxuuna magaalada u jiraa qiyaastii 7 kilomitir. Deegaanada loo dalxiiska tago waxaa ka mid ah togga Baalade gaar ahaan Gaaca Iyo guud ahaan deegaanka kale ee qurxoon ee baalade. Laag, Karin & Yalho ayaa iyana ka mid ah meelaha aadka loogu dalxiiska tago.
Magaaladu waxay leedahay Hoteelo waaweyn oo bixiya adeegyada hoteelada, kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah Jubba Hotel, International Village, Gacayte iyo Huruuse. Sidoo kale meelaha aadka loogu nasashada tago waxaa ka mid ah Beerta Rays oo ah beer aad u ballaaran oo loo nasasho doonto.
Sawir Beerta Rays, 2018
Boosaaso waxaa si aad ah ugu dhaqan oo soo camirey qaxooti fara badan oo degan daafaha iyo Gudaha magaalada waxaana taasu keentay koror xoogan oo ku yimaada dadkii magaalada deganaa guud ahaanba.
Magaalada Boosaaso waxay ka kooban tahay 16 xaafadood oo ay ka mid yihiin Biyakulule, Raxiis, Baalade, Gerible, Laanta Hawada, Gusoore, Xaafatu Carab, Suweyto, Raf & raaxo, New Boosaaso, Ridwaan, Dayaxa, Cariga, Xaafada madaxtooyada iyo kuwo kale.
Fagaaraha Magaalada waa Barxadda Gaaca. waxay ku taal Ka soo horjeedka Xarunta Dowladda Hoose ee Magaalada . Jihada Galbeed ayeey Kaa qabaneysaa Marka la joogo Dhismaha Kowaad ee Dowladda Hoose,. Bartamaha Barxadda waxaa ku yaal Aargada Magaalada, waxay ku taal meel 4 Wado Isugu yimaadaan Waana Goobta kowaad ee dadweynuhu Isu Yimaadaan Xilliyada Fantasiyaha, Isu soobaxyada, Iidaha IWM. Dhismayaasha caaradka ku haya Barxadda qaybtood waxay magac wadaag la yihiin Barxadda Sida Dabaqa Gaaca oo ka mida Saraha ku hareeraysan Barxadda. Isgooyska Barxadda Gaaca waa kan ugu mashquulka badan Magaalada. waana mid ka mida Isgooysyada ugu mashquulka badan guud ahaan wadanka soomaaliya.
Magaalooyinka la mataansan
12 August, 2016- Mataanaynta Bosaso-Minneapolis Labada Duq Yaasiin Mire & Betsy Hodges oo si wada jir ah u saxiixaya heshiiska mataanaynta
12-kii August 2016. Duqii magaalada Boosaaso ee xilligaas Yaasiin Mire Maxamuud ayaa si wada jir ah ula saxiixday Duqa Magalaada Minneapolis ee Cariga Maraykanka heshiish lagu Mataanaynayo Magaalooyinka Boosaaso Iyo Minneapolis, Munaasabadda saxiixa heshiiska mataanaynta ayaa ka dhacday Hall-ka Dowlada Hoose ee Minneapolis.
Administrative map of Bosaso District
↑ . CBS. 10 October 2014 http://minnesota.cbslocal.com/2014/10/10/minneapolis-city-council-approves-new-sister-city-in-somalia/. Soo qaatay 10 October 2014. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Boosaaso&oldid=204804"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Agoosto 2020, marka ee eheed 14:32.